Noraisin'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina nihaona taminy teny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha, androany 31 jolay 2021, ny iraky ny Filohan'ny Repoblika Demokratikan'i Congo, Felix Tshisekedi, izay sady Filohan'ny Vondrona Afrikanina Ny delegasiona, izay notarihin'Atoa. Nicolas Kazadi Kadima, izay Minisitry ny fitantanam-bolan'i Congo, dia nitondra ny teny fankaherezana tamin'ny Filoha Andry Rajoelina mikasika ireny fikonokononana hifofo ny ain'ny Filoham-pirenena Malagasy ireny. Noresahana nandritra ity fihaonana ity ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'i Congo sy Madagasikara ary ireo fanamby iraisana eo amin'ny samy firenena Afrikanina sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. (Jereo Sary Tohiny)
Manameloka ny fikasana hifofo ny ain'ny Filohan'ny Repoblika ny antoko UNDD, tamin'ny alalan'ny Filoha Nasionaly Manoro Régis sy ireo mpitarika ny antoko tamin’ny fanambarana nataon’izy ireo ny alatsinainy 26 jolay. Tsy soatoavina malagasy ny fifofoana aina, indrindra ny Filohan'ny Repoblika izay Ray aman-drenin'ny firenena ka manameloka tanteraka izany ny UNDD, hoy ny fanambarana. Manamafy ny antoko UNDD fa tsy vahaolana ao anatin'izao fahasahiranana mihatra maneran-tany izao ny fanonganam-panjakana.
Namory ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika sy ireo Lehiben'ny Etamazaoron'ny telo, miaraka amin'ireo mpiasa rehetra eto anivon'ny Ministera sy ny Etamazaoro, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Richard, ny alatsinainy 26 jolay maraina, teo Ampahibe. Nandritra izany no nanomezany baiko sy toromarika amin'ny fametrahana ny paikady rehetra entina miady, manoloana ny fikasana hifofo ny ain'ny Filohan'ny Repoblika. Nanamafy ny tenany fa miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena sy ny safidim-bahoaka ny Foloalindahy ny Tafika. Nampitandriana ihany koa izy ho an'ireo miaramila amperin'asa mba tsy ho alaim-panahy hiray petsapetsa amin'ny teti-dratsy toy izany.
dimanche, 25 juillet 2021 17:17
Sary : Brack-Tolotah Léon
Lalana Tsiroanomandidy-Maintirano : Herinandro vao vita
Miantso ny filoha Andry Rajoelina mba hampanamboatra haingana ny lalana Tsiroanomandidy-Maintirano ny mpampiasa iny lalam-pirenena RN1b iny. Herinandro vao vita ny lalana mirefy 400 km eo ho eo noho ny haratsiny, izay sady mamakivaky faritra menan’ny asan-dahalo ihany koa. “Hitanay ny fampandrosoana ataonao eto amin’ny firenentsika. Betsaka ny asa efa vitanao sy ny mbola hataonao kanefa mangataka izahay aty amin’ny faritra Melaky mba handinihana ihany koa ny lalanay fa tena mijaly izahay aty”, hoy izy ireo. Vao haingana no hita niteny tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ao an-drenivohitra ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Morafenobe Voninahitsy Jean-Eugène. Nampitandrina mivantana ny filoham-pirenena izy tamin’izay fa tsy hahazo ny vaton’izy ireo intsony izy amin’ny fifidianana manaraka raha tsy vitany io lalana RN1b io. Balita Raharisoa (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 23 juillet 2021 10:11
Antenimieram-pirenena : Manameloka ny teti-dratsin’ireo nikasa hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena Malagasy
Nanao fanambarana ny Birao Maharitry ny Antenimieram-pirenena ny alakamisy 22 jolay 2021 tamin’ny 5 ora sy sasany teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza. Nandritra izany no nanehoan’izy ireo ny fanamelohany ny teti-dratsin’ireo nikasa hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena Malagasy. Teo ihany koa ny fankasitrahana ny fiaraha-miasan’ireo tsara sitrapo izay nanome angom-baovao nahafahana nampandamoka ny fikasan-dratsy. Nidera manokana ny asan’ny mpitandro filaminana izy ireo amin’ny asany izay nahitana vokatra mivaingana. Nampahery hatrany ny Filoham-pirenena sy ny ankohonany izy ireo amin’ny adidy masina mbola miandry azy, ary mbola nanantitra ny fanohanany hatrany ny Filoha izy ireo.
vendredi, 23 juillet 2021 08:19
Antenimierandoholona : Manameloka tanteraka ny fifofoana ny ain’ny Filoham-pirenena
Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety ireo Loholon’i Madagasikara, izay notarihin’ny Filohany, Razafimahefa Herimanana, ny Alakamisy 22 jolay 2021 tao amin’ny Lapan’Anosikely. Manoloana ny toe-javamisy ankehitriny dia manao izao fanambara izao ny Loholon’i Madagasikara : 1- Manameloka tanteraka ny fifofoana ny ain’ny Filoham-pirenena sy ny tompon’andraikitra ambony maromaro. Tsy azo ekena ny fandatsahana ain’olona na inona na inona antony. 2- Miarahaba sy midera ny fahamailoan’ny mpitandron’ny filaminana sy ny fandraisana andraikitry ny Fitsarana nahafahana nisakana izao teti-dratsy mahatsiravina izao. 3- Mankahery sy miray fo amin’ny Filoham-pirenena sy ny Vady aman-janany, ary mamporisika azy hatrany hanohy ireo asa fampandrosoana lovainjafy sy manome vahana ny enti-manana eto an-toerana, ary mamporisika azy hitaky hatrany ny famerenana ireo Nosy Malagasy. 4- Mitaky ny fametrahana sy fanajana ny fiandrianam-pirenena, ny maha Repoblika an’i Madagasikara, amin’ny fananany fitsarana sy ireo mpanao fanadihadiana rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 22 juillet 2021 18:20
IRMAR : Nanao fanambarana mahakasika ny raharaha fikasana hamono ny Filoha
Androany alakamisy 22 jolay dia nampiantso mpanao gazety ny vovonana Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina tao amin'ny foiben-toerany ARENA. FANAMBARANA Ny Vovonana IRMAR, ivondronan’ireo Antoko sy Fikambanana manohana ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, dia manambara fa : - Manohitra tanteraka sy ankitsirano ny teti-dratsin’ny sasany hampiditra ny Firenena Malagasy ao anatin’ny korontana sy ny ady an-trano amin’ny alalan’ny fikasana hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, mba hisakanana ny fampandrosoana efa hirosoan’i Madagasikara ankehitriny. - Manameloka amin’ny fomba rehetra ny fitetehan’olom-bitsy hametraka ny adilahy politika ho ambonin’ny tombontsoan’ny Malagasy manontolo mba ahafahan’izy ireo manao ampihimamba ny harem-pirenena. - Mitsipaka amin’ny heriny rehetra ny fanandraman’ny sasany hanatanteraka fomba mamohehatra tsy mifanaraka amin’ny Demokrasia sy ny Soatoavina Malagasy hiarovana tombontsoa manokana. Koa ny Vovonana IRMAR dia:
Nanolotra fitaovan-kajimirindra sy fifandraisan-davitra ho an’ny Minisiteran'ny Fitsarana ny governemanta amerikana, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID), hanatsarana ny fitantanana ao amin’ny Fitsarana momba ny kaonty sy hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka. "Ny fanatsarana ny fitantanana ny firaketan-tsoratra no ahafahan’ny Fitsarana miantoka fa ny vokatry ny fanadihadiana, ny tatitra ary ny didim-pitsarana dia azo ampiasaina amin’ny fanapahan-kevitra mikasika ny fitantanana sy ny politika," hoy ny Tale Jeneralin’ny USAID John Dunlop. "Ny andrim-panjakana avo mahaleo tena sy mahavita tena, dia singa iray lehibe amin'ny fitantanana ara-demokratika". Ny Fitsarana momba ny Kaonty dia ratsamangaikan'ny andrim-panjakana eto Madagasikara, miandraikitra ny fanaraha-maso sy fitsarana ny fandaniam-bolam-panjakana rehetra, ary koa manao tombana ny vola lany sy nampiasain'ny mpanantanteraka araka ny teti-bola notapahan'ny Parlemanta.
samedi, 17 juillet 2021 09:48
Volam-panjakana : Fitsinjarana ny tolo-bidy nolaniana isam-paritra ny taona 2019
Volam-panjakana : Fitsinjarana ny tolo-bidy nolaniana isam-paritra ny taona 2019 Région - Montant - % - Centrale 1 742 130 514 683,18 = 92,86% - Alaotra Mangoro : 26 908 832 905,37 = 1,43%- Amoron'Imania : 3 119 705 554,49 = 0,17%- Analamanga : 26 129 265 949,54 = 1,39%- Analanjirofo : 1 983 073 150,66 = 0,11%- Androy : 1 033 093 134,84 = 0,06%- Anosy : 4 906 897 375,40 = 0,26%- Atsimo Andrefana : 5 436 780 826,72 = 0,29%- Atsimo Atsinanana : 1 742 901 267,38 = 0,09%- Atsinanana : 7 445 656 989,80 = 0,40%- Betsiboka : 1 820 488 347,70 = 0,10%- Boeny : 8 150 085 949,93 = 0,43%- Bongolava : 2 370 844 269,42 = 0,13%- Diana : 6 864 428 033,05 = 0,37%- Haute Matsiatra : 9 237 273 626,88 = 0,49%- Ihorombe : 1 417 614 406,15 = 0,08%- Itasy : 3 245 815 164,00 = 0,17%- Melaky - 1 630 219 672,65 = 0,09%- Menabe : 2 234 354 276,00 = 0,12%- Sava : 3 641 488 806,73 = 0,19%- Sofia : 3 870 691 050,49 = 0,21%- Vakinankaratra : 6 554 970 766,01 = 0,35%- Vatovavy Fitovinany :…
Photos : Topito.com
En introduction, le site précise en ces termes : "Si chez Topito on aime bien vous faire rire tout en vous livrant des informations utiles ou insolites, on déborde parfois un peu sur des sujets plus sérieux, comme le réchauffement climatique, sans pour autant considérer notre travail comme du journalisme mais parce que ces sujets nous tiennent à cœur. C’est pour ça qu’aujourd’hui on souhaite vous parler de la situation actuelle de Madagascar qui est tout bonnement catastrophique. Pour bien comprendre ce qui se passe là-bas et pourquoi c’est alarmant on va essayer de voir ensemble les points clés de cette affaire, en tentant de vulgariser un peu tout ça." Dans une publication du 12 juillet, l’auteur cite ses sources à la fin de l’énumération : RFI, France Info, France Info 2, France Info 3, L’Express, Le Monde, L’Obs, MSN Actualités, TV5 Monde. Autant de supports médiatiques français. Voici le Top 10 des choses à savoir sur la situation à Madagascar selon lui :